ဝိပဿနာဘာဝနာ အားထုတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း	Posted on October 24, 2009	by mettayate “၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ဆိုတာ ဘာလဲ”
၃) သာသနာ နှင့် ကြုံ တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်ရန်။ ၄) ဘေး ကြီး ၄ ပါးမှ လွတ်မြောက်ရန်
၅) သံသရာ ကြွေးကို အကြေဆပ်ရန်။ (ကြွေးသုံးမျိုး ပို့စ်၌ ဖတ်ရှုပါ။) ”ပုထုဇဉ် လေးမျိုး”
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများနည်း